Fanohanana feno ho an'ny hafatra SMS vaovao avy amin'ny Pushbullet | Androidsis
Ny hafatra SMS dia manana WhatsApp ho toy ny demonia lehibe izay naka ny toerana nisy azy ireo napetraka taona vitsivitsy lasa izay izay no fomba tsara indrindra hihaonana amin'ny namana na handefa hafatra fohy toa ny Twitter izay nilazanay hafatra lehibe tamin'ny teny vitsivitsy. Amin'izao fotoana izao dia mbola eo amintsika ihany izy ireo, ary ho an'ny mpampiasa sasany dia manan-kery mandritra ny fotoana sasany izy io, satria manolotra azy ireo maimaim-poana ny mpandraharaha azy ireo noho ny fifanarahana nataony na tamin'ny hafa, raha tsy misy safidy hafa noho ny mandefa SMS satria tsy manana Internet isika ao amin'ny faritra.
Y tsy hoe manandrana manala SMS ihany koa ireo mpandraharaha, satria efa fantatray ny fomba anoloran'ny Google anao kely ny fitiavany amin'ny fampandrosoana amin'ny Google Messenger mihitsy hanolotra fampiharana tsara kokoa ho an'ireo mpampiasa azy. Misy zavatra mitranga amin'ny vondrona fampandrosoana ao ambadiky ny Pushbullet, izay ao amin'ny fanavaozana vaovao dia manome fanohanana feno ho an'ny hafatra SMS amin'ny solosaina, na amin'ny alàlan'ny interface web na ilay application mihitsy.
1 Traikefa feno amin'ny solosainao amin'ny SMS
2 Mbola zava-dehibe ny SMS
Traikefa feno amin'ny solosainao amin'ny SMS
Raha tokony hamaly ny hafatra tsirairay ianao dia izao Pushbullet no ahafahanao manana traikefa feno amin'ireo hafatra SMS ampifanarahana amin'ny findainao. Midika izany fa afaka mandefa hafatra an-tsoratra amin'ny PC ianao mandritra ny fotoana iasanaoAvy eo makà resaka avy eo amin'ny telefaona ary ho tonga amin'izay antenainao azy ireo ny hafatrao.
Ka manohy manome kalitao avo kokoa i Pushbullet ho izany serivisy fampandrenesana izay nipoitra tamin'ny taon-dasa ary nanjary iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra handefasana rakitra eo anelanelan'ny sehatra samihafa. Raha nanjary nalaza noho io antony io izy, dia vao nohavaozina miaraka amin'ny fanavaozana lehibe izay nanompoana azy mampifandray chat eo amin'ireo mpampiasa na ampidiro amin'ny lozisinao ny lohan'ny chat toa ny Facebook Messenger.
Mbola zava-dehibe ny SMS
Ny fanavaozana vaovao mitondra miaraka aminy fomba voalamina tsara kokoa handefasana hafatra SMS amin'ny solosainao. Fifanarahana tsara kokoa izay misy ny resadresaka mavitrika rehetra ary mampiseho ireo hafatra tsirairay tonga amin'ny findainao mba hahafahanao mamaly azy ireo avy amin'ny kitendry solosainao ary saika tsy misy korontana.
Raha fintinina, inona toy ny hoe nanana ilay fampiharana SMS tamin'ny finday avo lenta tamina solosainao ianao. Azonao atao koa ny manao resaka marobe amin'ny fotoana iray amin'ny fipihana ny zana-tsipìka eo ankavanan'ny anaran'ny mpampiasa, izay hanokatra ny varavarankely fifampiresahana ho toy izany ihany koa. Ny zavatra rehetra dia mijanona mifandrindra ka na inona na inona anananao amin'ny telefaona anananao dia hanana azy ao amin'ny fikandrana fampiharana Pushbullet ianao.
Amin'ity zava-baovao ity izay manohana ny hafatra feno amin'ny SMS, ankehitriny dia tsy mila maminavina fotsiny isika inona ny manaraka an'i Pushbullet. Hatramin'izay, miaraka amin'ny fanavaozana mitohy Pushbullet dia manana loko hafa ary mampiditra fampisehoana vaovao manitatra ny serivisy natolotra ny mpampiasa avy amin'ny inona ny fampitahana an'io rakitra io eo amin'ny sehatra samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Pushbullet ho an'ny Android dia mahazo fanohanana feno amin'ny hafatra SMS
Rovio dia nanambara ny Angry Birds 2 amin'ny 30 Jolay